Waa maxay doorashada xalaasha ah ee uu sheego RW Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Sida ay muujiyeen Madaxweynahasha Jubbaland iyo Koofur Galbeed, sanad doorasheedkaan waxaa loo aqoonsan doonaa midkii musuqa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida la saadaalinayo doorashooyinka sanadkaan dalka ka dhacaya ayaa noqon doona kuwii ugu musuqa iyo wax is dabamarint badnaa taarikhda, sidaas oo ay tahay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, wuxuu ku celceliyaa in uu qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah oo boob iyo wax is daba marin ka fog.
Hayeeshee, Rooble, wuxuu si la yaab leh u soo dhaweeyay go’aan shalay ka soo baxay Xaafiiska Madaxweynaha Koofur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, kaas oo ay ka muuqato ku tagrifal awoodeed iyo inuu uu dad gooni ka reebay tartanka Aqalka sare, isla-markaana uu u xiray kuwo kale.
Lafra-gareen, wuxuu tartanka Aqalka Sare u xiray shaqsiyaad ay xigto iyo xidid yihiin, oo Fahad yo Farmaajo wataan, wuxuuna darka baratanka ka dheereeyay xubnaha Farmaajo mucaaradka ku ah ee o ay kamid yihiin Senatar Xuseen Sheekh Maxamuud oo ahaa Xoghayaha Xisbiga Xasan Sheekh ee UPD iyo Senetar Ilyaas Cali Xasan oo ahaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda Xisbiga Sheekh Shariif ee Himilo.
Iyadoo taasi jiro Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, wuxuu soo dhaweeyay magacaabidda Laftagareen iyo guddiga doorashada Koofur Galbeed.
“Waxaan Madaxweyne Laftagareen iyo guddiga doorashada Koofur Galbeed ku bogaadinayaa soo saarista jadwalka doorashada xubnaha Aqalka Sare iyo liiskooda anigoo u rajeynaya in doorashadu ay ku qabsoonto jawi nabdoon oo hufan”. Ayuu yiri Rooble.
Sidoo kale, doorashadii ka dhacday Kismaayo ayaa dhankeeda la wariyay in Madaxweynaha Jubbaland uu u xiray dad gaar ah, qeyb ka mid ah tartamayaasha ayaana muujiyay cabasho la xariirta natiijada, hayeeshee, Rooble, Iyana waa soo dhaweeyay, walina wuxuu ku celcelinayaa doorasho xor iyo xalaal ah.
Maamulka Galmudug ayaa la rumeysan yahay in ay ka dhici doonto doorashada ugu adag, marka loo eego guud ahaan maamullada ka jira dalka, Hirshabeelle, waxa ay mari doontaa wadada Koofur Galbeed, halka Puntland ay qaadi doonto jidka Jubbaland.